အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတွေ မရှိတဲ့အခါ ရတနာဂတ်စ်လုပ်ကွက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ…? – Shan Ma Lay
အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတွေ မရှိတဲ့အခါ ရတနာဂတ်စ်လုပ်ကွက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ…?
May 29, 2021 aung aungLeaveaComment on အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတွေ မရှိတဲ့အခါ ရတနာဂတ်စ်လုပ်ကွက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ…?
အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ် ရေနံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Chevron နဲ့ Total က ရေနံကရရှိတဲ့ ငွေတွေကို စစ်ကောင်စီကို မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းက အတော်လေးကို ကြီးပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က တကယ်ပဲ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ရပ်ဆိုင်းစေနိုင်သလား၊ ဝင်ငွေ လုံးဝ ပြတ်နိုင်ပါသလား။Andaman Sea အက်ဒမန်ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Yadana offshore ရတနာ ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်က စပ်တူလုပ်ငန်းပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံပိုင် MOGE ရယ်၊ ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTTEP ၊ ပြင်သစ် Total နဲ့ အမေရိကန် Chevron ပါ ပါတယ်။
ထွက်ရှိလာတဲ့ ဂတ်စ်ကို Moattama Gas Transportation မုတ္တမ ဂတ်စ်ဖြန့်ချီရေးက လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိုင်းကိုရောင်းချပြီးတော့ ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအများစုကို ရန်ကုန်အတွက်သုံးပါတယ်။ (Ref: BKK post)
Total ကတော့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ ၃၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပိုင် Chevron ကတော့ ၂၈.၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ပါတယ်။ ထိုင်းကုမ္ပဏီ PTTEP က ၂၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း MOGE က ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ပါတယ်။
အခု Total/ Chevron က အပြီးသတ် ရပ်ဆိုင်းတာမဟုတ်ပါ။ အမြတ်ခွဲဝေမှုအပိုင်းကိုပဲ ရပ်တာပါ။ Total/ Chevron က အပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းတယ်ဆိုရင်တောင် ကျန်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းကို PTTEP နဲ့ MOGE က ဆက်လုပ်ရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။
PTTEP ဆိုတာလည်း ရေနံလုပ်ကွက်တွေ ဒီလိုလုပ်ငန်းကြီးတွေကို အကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှယ်ယာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ထားတဲ့ ထိုင်းက ဒီလုပ်ငန်းကို ဒီအတိုင်း လက်လွှတ်ပါ့မလားဆိုတာ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ကွက်ကနေ ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကို ဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် PTTEP လည်း Total/ Chevron တို့လို ပါဝင်လာမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဆိုလိုတာက MOGE နဲ့ PTTEP ဆက်လုပ်ကိုင်ပြီးလည်ပတ်လို့ရပါတယ်။
ရတနာလုပ်ကွက်က ဂတ်စ် ၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိုင်းကိုရောင်းချတာကြောင့် ဝင်ငွေအများစုဟာ ပြည်တွင်းကနေ ရတာပါ။ မုတ္တမဂတ်စ်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ MOGE ဟာ တစ်နှစ်ကို ၄၃.၆ သန်းထိ ရရှိပါတယ်။
Justice for Myanmar ရဲ့စာရင်းအရဆိုရင် သုံးနှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၈၇၂.၈ သန်းအထိ ရှာပေးခဲ့ (၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ) ပါတယ်။
ဝင်ငွေအများစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Chevron နဲ့ Total ရှယ်ယာရှင်နှစ်ဦး မရှိတော့တဲ့အခါ ထိုင်း PTTEP အတွက် အခွင့်ရေးတစ်ရပ်လိုတောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Chevron နဲ့ Total နှစ်ခုလုံးမလည်ပတ်တော့တဲ့
ကာလတစ်ခုမှာတော့ စစ်ကောင်စီဟာ ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရုန်းကန်ရမှာပါ ဒါက ၃-၆ လလည်းဖြစ်နိုင်သလို အလွန်ဆုံး ၁ နှစ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေကို စဉ်းစားတဲ့အခါ ရှယ်ယာအများစုကို PTTEP က လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရေးပေးပြီးတော့ စစ်ကောင်စီက စည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Chevron နဲ့ Total နေရာမှာ
တခြားစိတ်ဝင်စားသူတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ စစ်ကောင်စီက ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနေရာကို အထူးစိတ်ဝင်တစား မျက်စိကျမှာက တရုတ်နဲ့ ဟောင်ကောင်/ စင်္ကာပူလို နိုင်ငံမျိုးတွေရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လေယာဉ်ဆီလုပ်ငန်း PUMA ကနေ သင်ခန်းစာကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဟာ လေယာဉ်ဆီမပြတ်လတ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းစုံနဲ့ပေးတဲ့အခါ PUMA ရဲ့ အဆောက်အအုံတွေအကုန်လုံးနီးပါးကို အသုံးပြုပြီးတော့ တခြားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကို မက်လုံးပေးပြီး လုပ်ကိုင်စေပါတယ်။ အခုလည်း ဒီနည်းနဲ့ ဆက်လည်ပတ်နေပါတယ်။
စစ်ဘက်မှာသုံးမယ့် လေယာဉ်ဆီ ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ကိုတင်ပို့မယ့် လေယာဉ်ဆီတွေကို စစ်ကောင်စီဟာ တရုတ်ကနေ တင်သွင်းပါတယ်။ ဒီဟာကို KIA က နေ ကြားဖြတ်တိုက်လို့လေယာဉ်တင်ဆီဘောက်ဆာ မီးလောင်တာလည်း မနည်းတော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ရသလောက်နဲ့ ထပ်လည်ပတ်နေတုန်းပါ။
ဆိုလိုတာက ထိုင်းနဲ့တရုတ်ဟာ တကယ်ပဲ အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်တို့လိုမျိုး စစ်ကောင်စီအပေါ် ပြတ်သားပါ့မလား။ လူ့အခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကနေ Total/ Chevron တို့ကို ဖိအားပေးတာကြောင့်
ကြီးမားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရလဒ်ဟာ အဆုံးသတ်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် PTTEP ထိုင်းနဲ့ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် ကိုလည်း အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီအပင်က ဆက်ကြီးထွားနေဦးမှာပါ။
အခုကျနော်တို့ပြောနေတာက ရတနာလုပ်ကွက်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဇောတိက၊ ရဲတံခွန် ဆိုတဲ့ လုပ်ကွ
က်တွေ မပါသေးပါဘူး။ ဇောတိက နဲ့ရဲတံခွန် လုပ်ကွက်ကလည်း လည်ပတ်နေပါပြီ (production) ၊ exploration ရှာဖွေတဲ့အဆင့်မဟုတ်တော့ပါ။
ဇောတိကလုပ်ကွက်ကို PTTEP က အဓိက လုပ်ကိုင်ပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ပါတယ်။ MOGE က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပါ။
ရဲတံခွန် လုပ်ကွက်ကိုတော့ Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. က လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ Petronas ဟောင်ကောင်က ၄၀.၉၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ MOGE က ၂၀.၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဂျပန် ကုမ္ပဏီ နီပွန် (Nippon Oil exploration) က ၁၉.၃၂ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ထိုင်း PTTEP က ၁၉.၃၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ(NUG) ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနထံ ထိုငျးနပေါလီ ဂျေါရျခါးအဖှဲ့ခြုပျ(ဘနျကောကျ)မှ ထိုငျးဘတျ ငှေ 300,000 (ဘတျသုံးသိနျးတိတိ)လှူဒါနျး
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (NUG) နဲ့ ပထမဆုံးတရားဝငျပူးပေါငျးလိုကျတဲ့ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး (CNF)(အပွညျ့စုံဖတျရနျပုံကိုနှိပျပါ)
June 3, 2021 aung aung
ရှာထဲဆငျးပွီး ဆိတျတှေ၊ဝကျတှသှေားလှတျတဲ့အခြိနျမှာ စဈတပျနဲ့ထိပျတိုကျတှရေ့ငျး ကွုံခဲ့ရတဲ့အဖွဈအပကျြတဈခုကို ဖှငျ့ဟပွောပွလာတဲ့ ရဟနျးတဈပါး